नयाँ भर्ना यसरी गरौं » Khabarbit
नयाँ स्कुल र भर्नाको चहलपहल हुने विद्यालयका चौरभरि हरियो दुबो उम्रिएको छ यस वर्ष । न त विद्यार्थी भर्ना नै भएका छन् । न त पठनपाठन नै सञ्चालनमा छ स्कुलहरुमा । गेटैमा चाइनिज ताला झुण्ड्याएको ३ महिना भयो । लकडाउन र कोरोनाको त्रास अफावसिद्ध बन्यो सबैका लागि यसपालि ।
वैशाख महिना बालबालिकाका लागि विद्यालयको यात्रा शुरु गर्ने महिना थियो । नयाँ कक्षामा जाने र ज्ञान सिक्न शुरु गर्ने समय पनि हो । सरस्वती पूजामा अक्षरआरम्भ गराइएका नानीबाबुहरुलाई विद्यालयको नयाँ पोशाकमा यसै महिनाबाट विद्यालय पठाउन शुरु गरिन्थ्यो । तर यो वर्ष कोरोना १९ कोभिड महामारीका कारण सबैखाले शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन् । ५ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समुहका झण्डै ६७ लाख विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थी लकडाउनका कारण घरमै बस्दै आएका छन् ।
गत चैत महिनामा सञ्चालित वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने, एसईई परीक्षाको आन्तरिक मूल्यांकन सिट तयारी गर्ने, अनलाइनबाटै भए पनि नयाँ भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रेडियो टिभीबाट दूरशिक्षा विधिबाट पठनपाठनको सुरुआतजस्ता कार्यक्रमको तयारी हुनुलाई राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ ।
लामो समय लकडाउनमा बस्दाबस्दा बालबालिकाहरु छटपटाउन थालेका छन् । यसरी थुनिएर बसेका बालबालिकामा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास पनि छ । कोरोनाको डरले त्रसित बनेका यी कलिला मनहरुलाई यस वर्षको भर्ना अभियानसँगसँगै अभिभावक र विद्यार्थी दुवैलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।
शैक्षिक संस्थाहरुले नयाँ भर्नासँगै बालबालिकालाई मनोपरामर्श र अभिभावकलाई अभिमुखीकरण सेवा प्रदान गर्नसके भयरहित वातावरणमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न सहज हुने देखिन्छ । नयाँ बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउन अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नयाँ भर्नासँगै पढाइप्रति रुची जगाउने, प्रेरणा र हौसला दिने काममा अभिमुखीकरण कार्यक्रले निकै सहयोग पुग्दछ ।
सफलताको सपना बोकेर वर्षेनी विद्यालयहरुमा कक्षा एकमा धेरै विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । जहाँबाट शैक्षिक गन्तव्यको हजारौं माइलको यात्रा आरम्भ हुन्छ । विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका पूर्णरुपमा अभिभावकसँग आश्रित हुने हुँदा अभिभावकले आफ्ना सन्तानको भविष्य निर्माणको जग तयार पार्न मद्दत पुर्याउनुपर्छ ।
कोरोनाको त्रासका बीचमा अभिमुखीकरण सम्भव होला त यस वर्षको नयाँ भर्नामा ? किन चाहिन्छ त नयाँ भर्नासँगै अभिभावकलाई अभिमुखीकरण ? यस वर्ष सामाजिक दुरी कायम गर्दै गरिने भर्ना र अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्ला त ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
शैक्षिक सत्रको शुरुमा गरिने यस्तो अभिमुखीकरण कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने गर्दछ । यस वर्षको भर्ना अभियानमा सबैभन्दा पहिेले अभिभावक अभिभावकबीच, विद्यार्थी विद्यार्थीबीच, अभिभावक शिक्षकबीच र विद्यार्थी शिक्षकबीच मानसिक रुपमा कोरोनाको त्रास हटाउन आवश्यक छ । यसले आपसमा परिचित हुन सहयोग गर्दछ । यस्तो कार्यक्रम नयाँ अभिभावक र विद्यालयबीच परिचय गराउनुका साथै विद्यालयमा भएका विद्यार्थी र अभिभावकको संलग्नतामा स्वास्थ्य सुरक्षा र चेतना बुझाउन लक्षित हुनुपर्छ ।
यसले विद्यालय सञ्चालनमा कसको के भूमिका हँुदोरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न नयाँ अभिभावकलाई सजिलो हुन्छ । बालबालिकाको शिक्षणमा शिक्षकलाई मद्दत पुग्छ । विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार ल्याउन र अभिभावकको सहयोग लिन प्रत्येक विद्यालयले नयाँ भर्नासँगै अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
छोराछोरीको आँखामा आफ्ना सपना सजाएर उनीहरुको सुन्दर भविष्य निमार्ण गर्ने दायित्व लिएर विद्यालयको ढोकामा स्यानिटाइजरले शुद्धिएर पाइला टेक्ने नूतन अभिभावकका लागि शैक्षिक चेतना जगाउनु नै यस वर्षको अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुनसक्छ ।
कक्षा १ मा भर्ना भएका नानीबाबुहले कक्षा बीचैमा छोड्ने र दोहोर्याउने विद्यार्थी संख्या बढी हुन्छन् । विशेष गरी अभिभावकले कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकालाई नियमितता बढाउन घरमा कसरी सहयोग गर्ने ? विद्यालयमा कसरी सहयोग गर्ने र शिक्षकलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? बालबालिकाले गरेका क्रियाकलापलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरालाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रत्येक अवस्थाका बालबालिकाको चारित्रिक विशेषता नयाँनयाँ जिज्ञासाले भरिएको हुन्छ । त्यसैले भर्खरै विद्यालयमा भर्ना भएका यिनै बालबालिकाको पठनपाठनमा सुधार ल्याउन अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ
विद्यालय समुदायको साझा संस्था हो । कतिपय विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । कोरोना संक्रमण समुदायमा नफैलियोस् भनेर गरिएको लकडाउन अब खुकुलो हुने क्रममा छ । महामारीको त्रासका बीचमा विद्यालय राम्रोसंग सञ्चालन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक संघ, अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेमा समग्र रुपमा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण असाध्यै राम्रो हुन्छ ।
सानासाना समुहमा सामाजिक दुरी कायम गर्दै अभिभावक र बालबालिकाले पालैपालो लकडाउनको अवस्थामा भोगेका सुखदुखका अनुभव साटासाट गर्न दिने, कार्यक्रम सकेपछि विद्यालयमा गरिने क्रियाकलापबारे वार्षिक कार्यतालिका वा शैक्षिक क्यालेन्डरका बारेमा प्रअ अथवा विद्यालयले अभिभावकलाई जानकारी गराउने सम्भव भएसम्म विव्यसका पदाधिकारीको जिम्मेवारी र काम कर्तव्य बताइदिने शिक्षकाको भूमिका, अभिभावकको भूमिका, विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने नियम आदिका बारेमा क्रमैसँग अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ ।
विद्यार्थीले बीचमा विद्यालय छोड्दा र कक्षा दोहोर्याउनुपर्दा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ भनेर सचेत तुल्याउने, मासिक त्रैमासिक वार्षिक कक्षागत अभिलेख र अनलाइन प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने, बालबालिकाका सुधार्नु पर्ने कमिकमजोरी भए एकअर्कामा सुझाव दिने लिने गर्नाले विद्यालय र अभिभावकबीच सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ ।
अभिभावकले सकेसम्म लामो दुरीका सवारी साधनमा बच्चालाई चढाएर जंकफुडको झोला बोकाइ विद्यालय पठाउनु भनेको कोरोना निम्त्याउनु हो । सकेसम्म नजिकको विद्यालयमा भर्ना गर्ने हो भने जोखिम कम हुने निश्चित छ । गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा ठूला र आकर्षक भवन भएका विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने भ्रम त्यागेर सुरक्षित वातावरण भएका विद्यालयमा भर्ना गर्दा केहीहदसम्म संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
अवस्था सामान्य नभएसम्म अभिभावकले प्रत्येक दिन विद्यालय गई आफ्ना बालबालिकाको विद्यालयमा रहने समय र उनीहरुले गर्ने व्यवहारसम्बन्धी बुझ्नुपर्छ । विद्यालयले पनि एप्समार्फत गृहकार्य, प्रोजेक्टवर्कका सम्बन्धमा र शैक्षिक उपलब्धीका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । दिनहुँ विद्यालय गएर बालबालिकाले फरकफरक कुरा सिकिरहेका हुन्छन् । त्यसको उचित प्रोत्साहन गरिने कुरा भर्नासँगै अवगत गराउनु राम्रो हुन्छ ।
उनीहरुलाई हरेक दिन पढाइको महत्व हुन्छ भन्ने कुरा सानैदेखि अभिभावकले बताउनुपर्छ । त्यस्तै दिनभरि स्कुलमा बस्दा बालबालिका भोकाउँछन् । उनीहरुलाई सिक्न गाह्रो हुन्छ । पढाइ छाडेर बीचमै भाग्न नसकुन् भनेर सरकारले नै दिवा खाजा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । अभिभावकले पनि उनीहरुलाई खाजाको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ ।
प्रत्येक अभिभावकले ठीक समयमा सुत्ने, उठ्ने, दाँत माझ्ने, हात धुने, नुहाउने बानीको रुटिन बनाएर अनिवार्य अभ्यास गराउनुपर्छ । यसलाई पछिसम्म उनीहरुले व्यबहारमा उतार्छन् । अभिभावकले दिनभरि गरेका क्रियाकलापहरु घरमा छलफल गरिदिनुपर्छ ।
समय मिलाएर गरिने यस्ता अभिमुखीकरणले शिक्षक तथा विद्यार्थीको सन्दर्भमा जीवनोपयोगी सीप विकास गर्न मद्दत मिल्दछ । आत्मवोध गर्न सिकाउँछ । आवेश तथा तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । विवेचनात्मक सोच र निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन र समस्या समाधान गर्दै सफलताका निम्ति लक्ष्य निर्धारण गर्नसमेत बेलाबेलामा गरिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम अभिभावकका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
बालबालिकाका लागि घर पहिलो पाठशाला र आमा पहिलो गुरुआमा हुन् । त्यसैले कक्षा १ मा नियमितता बढाउन अभिभावक बालबालिकाको हरेक ठाउँमा सहयोगी बन्नुपर्छ । “जहाँ प्रशंसा जीवित रहन्छ त्यहाँ विश्वास र आशा पैदा भइ पुरानो र नयाँ पुस्ताहरुको बीचमा आपसी सम्बन्ध पुनरस्थापित हुन्छ ।”
साथीभाइसँग भएको व्यवहार र गरेका कुराकानी आदि चाख लिएर सुनिदिने गर्नुपर्छ । कापी कलम छ छैन बुझेर व्यवस्था गरिदिने, खाजाको व्यवस्था गरिदिने, पढाइको सफलताका बारेमा स्याबासी दिने, घरबाट विद्यालय जाने व्यवस्था समयमै मिलाइदिने घरमा रुटिन बनाएर पढ्ने बानीको विकास गरिदिनु पर्छ । गृहकार्य र सरसफाइ कार्यमा मद्दत गरिदिनाले उनीहरु विद्यालय जान रमाइलो मान्छन् ।
कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने । वनभोज ,अभिभावक दिवस, प्रर्दशनी, ट्यालेन्ट सो आदि इभेन्टस्मा सहभागी भई हौसला दिने जस्ता गतिविधिप्रति चासो लिने गर्नाले उनीहरुमा पढाइ र विद्यालयप्रति चासो बढ्न जान्छ । घरमा बस्नभन्दा विद्यालय जान रमाइलो मान्छन् । उनीहरु दिनदिनै सफल हुन्छन् ।
फ्र्यांक ओउट्लाले भने झै “जब म आप्mनो विचारहरुलाई हेर्छु त्यो शब्दहरुमा रुपान्तरण हुन्छ । जब शब्दहरुलाई हेर्छु त्यो क्रियाशील कार्य बन्दछ । जब म क्रियशील कार्यलाई हेर्छु त्यो ब्यवहार बन्दछ । जब म ब्यवहारलाई हेर्दछु त्यो स्वभाव (आनीबानी) बन्दछ । जब म स्वभावलाई हेर्दछु त्यो मेरो भविष्यको भाग्य बन्दछ ।” हो, बालबालिका समाजका अत्यन्त संवेदनशील समूह पनि हुन् । बालबालिकाबिनाको समाज परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यिनीहरु समाजका भविष्य हुन् ।
शैक्षिक शत्रमा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थी एवं सम्पूर्ण अभिभावकलाई हार्दिक स्वागत छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : यसरी पुरा गर्नुहोस् असल अभिभावकको जिम्मेवारी
Tags: नयाँ भर्नाविचारविद्यार्थी
थप ५८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या सात हजार नाघ्यो